Ndị na-agbasa ozi nwere ike iweghachite data ngwa ngwa na Sutniant's Media Shuttle | NAB Show News | 2020 NAB Show Onye Mmekọ Media na Onye Mmepụta NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa Ozi
Ntụrụndụ Lightstorm na-akwado usoro Mmepụta Site na iji Blackmagic Design
Crystal Vision weputara ihe ndozi agba agba juru
RTV Slovenia na-agbasa mmekorita ya na Dalet ịgbanwe ngwụcha ngwụcha ngwụcha ngwụcha maka redio na TV na Dalet Galaxy ise
Calrec's Dave Sampson kwagara n'ime ọrụ IP ọhụụ dịka Ọkachamara Network
Howling Music ga-aga n'usoro na USMC na Wunderman Thompson
Home » Apụta » Ndị na-agbasa ozi nwere ike iweghachite data ngwa ngwa na Mgbasa ozi nke Signiant
Ndị na-agbasa ozi nwere ike iweghachite data ngwa ngwa na Mgbasa ozi nke Signiant
Ekwesịrị idobe mpempe akwụkwọ ọ bụla nke onye mgbasa ozi mebere ebe. Ugboro oge, oke data nwere ike ibute ụjọ, karịchaa mgbe ị na-ebufe ọtụtụ ya. Na ihu ọma, enwere ụzọ maka ndị mgbasa ozi na-emegharị ọdịnaya buru ibu, ọ gafere Signiant si nwere ọgụgụ isi nyefe ngwọta.
Signiant si mgbọrọgwụ gbadoro anya na mmepe nke ngwanrọ mbufe faịlụ maka ụfọdụ ụlọ ọrụ kacha ukwuu n'ụwa. Ihe omuma nke ulo oru a gụnyere ngaghari nke nnukwu koodu ala di n’uwa nile maka mmepe ngwanro zuru uwa. Ngwọta nke ụlọ ọrụ bara uru ebe ọ bụla enwere nnukwu mkpa ịkwaga nnukwu data na nchekwa, ntụkwasị obi na ọsọ. Mgbasa ozi na ntụrụndụ bụ mpaghara izizi na-anabata teknụzụ, buru ibu Signiant si ngwanrọ nyefe faịlụ a bịara bụrụ ihe dị mkpa n'etiti afọ 2000 ka ụlọ ọrụ ahụ si na-ese vidiyo na ihe nkiri banye na usoro mmemme faịlụ. Ndị gboo gboo gbakọrọ ụlọ ọrụ dịka Disney, NBC, na Apple iTunes, bụ ndị ji Signiant si ebe obibi dị iche iche dịka ihe dị iche iche na-abanye n'ụlọ ọrụ teknụzụ ụwa ha.
Ihe ịrịba ama ngwa ngwa pụta dị ka onye tụkwasịrị obi na-eduga na ụlọ ọrụ mgbasa ozi, na ọtụtụ ozi ozi-dị oke mkpa media na-arụ ọrụ bụ nke ha Onye njikwa + Ndị ọrụ kompeni bekee. Ma, ka ụlọ ọrụ ahụ arụ ọrụ na ọtụtụ ndị ama ama ama ama ama dị ukwuu, mbọ ha na-aga n'ihu na mmepe nke urukuru-obodo ngwanrọ na-eme ka usoro SolS ha dị ka ọ bụla.
Signiant si Ngwọta mbufe faịlụ nwere ọgụgụ isi na-enyere ụlọ ọrụ mgbasa ozi ụwa kacha elu na-ebugharị petabytes nke ọdịnaya kwa ụbọchị karịa na netwọk IP ọkọlọtọ Wuru na Signiant si patịzụ teknụzụ ndị na-ebufe ngwa ahịa, ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ na ọnụọgụ SaaS nke ala bụ ndị isi ahịa maka nnukwu mmegharị faịlụ n'etiti sistemụ, n'etiti ndị mmadụ, na site na igwe ojii. Otu ihe atụ dị otú ahụ bụ nke ngwọta ya SaaS bụ Ntanetị ụgbọelu.
Mgbasa mgbasa ozi bụ nke mbu bidoro na 2012 ebe o wetara ike nke teknụzụ Signiant, ikike ịnyefe ngwa ngwa ọ bụla n'usoro ọ bụla n'ụwa. O mekwara nke a maka ụlọ ọrụ nha niile site na ịhazi njirimara ndị dị mma yana ịnye nkwakọ ngwaahịa na ọnụahịa nke mezuru iji gboo mkpa onye ọ bụla site na obere ụlọ post ruo ụlọ mgbasa ozi ụwa niile.
Faịlụ Ọsịsa Media ngwangwa osooso na-enye ohere maka mmụba nke ọsọ nke nnyefe faịlụ na netwọ ọha na nkeonwe ruo ugboro 200 ngwa ngwa karịa usoro ọkọlọtọ (dịka FTP). Nka na uzu ndi nke Signiant ji aka ha kpochapu Nkwụsị, ebe ị na-eji bandwidth dịnụ eme ihe.
iji Ntanetị ụgbọelu na-enyere òtù aka ijikọ mbufe faịlụ ha n'ime otu ụzọ. Nke a pụtara na enwere ike inyocha, jikwaa ma na-achịkwa mmegharị mbufe na ndị ọrụ niile. Ọ na - ewepu nchegbu ọ bụla gbasara mbufe draịva siri ike, mpịakọta faịlụ, ma ọ bụ mebie ya n'ime obere faịlụ n'ihi na ọ na - enye onye ọrụ ohere iziga faịlụ nha ọ bụla, ebe ọ bụla. Ngwọta na-abakwa Checkpoint Malitegharịa ekwentị, nke na-ebugharị na-akpaghị aka ma ọ bụ malitegharia nnyefe dara ada. Checkpoint Malitegharịa ekwentị ga - enyere ndị ọrụ aka ịnata ozi email mgbe ebudatara faịlụ. Ntanetị ụgbọelu nwekwara atụmatụ nchebe dị omimi nke na-etinye ọtụtụ njikwa nchekwa maka sistemụ nke ga-emerịrị ọtụtụ ọdịda nchekwa tupu onye na-awakpo nwere ike ịnweta ohere dị mkpa.
Ntanetị ụgbọelu bụ ụzọ kachasị mfe iji zipu faịlụ buru ibu ngwa ngwa, ọ chọghị ọzụzụ. Onye ọrụ nwere ike ịnọ ogologo ma na-agba ọsọ na awa, na enweghị ịdabere na IT. Ndị nchịkwa Portal nwere ike soro mmegharị faịlụ, tinye ngwa ngwa ma ọ bụ wepu ndị ọrụ, ma hazie ọnụ ụzọ ha iji dakọtara akara na asụsụ.
Na mgbakwunye na Ntanetị ụgbọelu, Signiant mepụtara ngwaahịa SaaS ya nke abụọ na 2014, Flight, nke bu teknụzụ nyefe igwe ojii ọsọsọ. Flight na-eme ka ngagharị data buru ibu gaa na igwe ojii ma ọ nwere ike nwee ọtụtụ ọsọ ọsọ. A na-ejikarị ngwọta Saas a maka nnukwu ọrụ data in girgi dị ukwuu, karịsịa ndị metụtara itinye ọdịnaya n'ọtụtụ ọnọdụ gburugburu ụwa. 'Sgbọ elu ngwangwa nkwalite teknụzụ kwere maka Signiant ịgụnye nchekwa igwe ojii n'ime Media Shuttle, nke gbatịkwuru ngwa nke ihe ngwọta iji gụnye ihie igwe ojii.
Maka ozi ndi ozo banyere Media Shuttle na Flight, nleta www.signiant.com/company/.
Ihe Na-eme Pụrụ Iche Pụrụ Iche
Signiant si Enwere ike ịpụ iche n ’ụlọ ọrụ SaaS ya. Signiant nyefere onwe ya nchekwa nchekwa, nkwado nke faịlị na nchekwa ihe, nchekwa igwe ojii n'ihu igwe na-ere gụnyere Amazon na Microsoft, yana ngwakọta nchekwa ngwakọ ebe ma ụlọ nchekwa na igwe ojii nọ na-egwu. Saalọ ọrụ SaaS nke ụlọ ọrụ ahụ na-enye onye ọrụ ohere idozi ike nke oghere ụlọ ọrụ SaaS, yana nke ahụ gụnyere ịnweta, ịkọ akụkọ na ijikwa arụmọrụ site na nyocha weebụ dị nchebe. Enwere ike mezuo nke a mgbe ejikọtara ha na nchekwa nke ha, ma ọ bụ ụlọ ụlọ ma ọ bụ igwe ojii. Allowszọ a na - enye ụlọ ọrụ ohere ịnweta ụwa niile kachasị mma: nnweta zuru ụwa ọnụ na njikwa zuru oke na akụ na ọnụ ahịa nchekwa.
Maka ozi ndị ọzọ gbasara Signiant, gaa www.signiant.com/.
Mgbasa ozi CES2017 ojii sọftụwia ala Flight mgbasa ozi ụwa niile na-agbakọ Graham Chapman Prmoted toEditor nyefe faịlị Ntanetị ụgbọelu MStar Nlekọta SaaS Ngwọta SaaS Ihe ịrịba ama Signiant si patted teknụzụ SoftAtHome SoftAtHome, MStar, CES2017 nchekwa 2020-04-27
Previous: Onye nkuzi CTE, Mmepụta vidiyo - Pajaro Valley High School (.6 FTE)
Osote: Kwantum Na-amata Ndị Mmekọ Global zuru oke na Mgbasa na Ntụrụndụ na VirtualQ | NAB Partners Event
NAB Nkwupụta na FCC nnabata nke ikikere ngwa ikikere ịgba akwụkwọ ikike